गुडिरहेको माइक्रोका चालक ढलेपछि…. | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार गुडिरहेको माइक्रोका चालक ढलेपछि….
गुडिरहेको माइक्रोका चालक ढलेपछि….
२०७३, २० मंसिर सोमबार ०८:१५
बेनीबाट काठमाण्डौ तर्फ गएको एसी माईक्रोका चालक एक्कासी बेहोस भएपछि माइक्रोका मालिकले कुशलतापर्वक यात्रुलाई बचाएका छन् । आइतबार विहान बेनीबाट काठमाण्डौलाई छुटेको ५५८१ नम्बरको एसी माईक्रोका चालक एक्कासी ढलेपछि मालिक विशाल पौडेलले माइक्रोको गतीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
‘चालक ढलेको हामीले देख्यौ, मालिकले गतीलाई नियन्त्रणमा नलिएको भए मानवीय क्षती निश्चित थियो’ म्याग्दी दरबाङका सुमन गौतमले बेनीअनलाइनलाई भने । उनले चालक ढलेपछि यात्रुहरु चिच्चाउन थालेका थिए । काठमाण्डौको थानकोट नजिक चालक बेहोस भएपछि मालिकलले काठमाण्डौसम्म पु¥याएर नयाँ जिवन दिएको यात्रुको भनाई छ । छारे रोग रहेको चालक परिवर्तन गर्न समेत यात्रुले अनुरोध गरेका थिए ।
कमजोर दिल भएका ब्यक्तिलाई छारे रोगको सम्भावना हुने तथा मदिरा सेवन लगाएतका कारणले समेत समस्या देखिने भएकाले पनि समुहको नेतृत्वमा वा साधनहरुका चालकका रुपमा काम गर्नेहरुलाई छारे रोग भएमा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने चिकित्सकको भनाई छ । माइक्रोमा १८ जना यात्रु सवार थिए । यात्रुले सवारीमालिकलाई विषेश धन्यवाद समेत दिएका थिए । यता मालिक विशाल पौडेलले छारे रोग भएको आफुँलाई जानकारी नभएपनि उनको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बेनीदेखी नै निगरानी गरिरहेको जनाएका छन् । यात्रुको सहयोग प्रति समेत आभार प्रकट गरेका छन् ।
Previous articleम्याग्दीकी कमला बरुवाललाई ईश्वरी बौद्धिक अपाङ्ग राष्ट्रिय पुरस्कार
Next articleसामुदायिक विद्यालयको प्रावि तहमा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल